मदन भण्डारीको शव भेट्टाउने हेमबहादुरको बयान– जागिर पाइनँ, अरबतिर लागेँ – mYKantipur
३ जेठ, चितवन । आज जेठ ३ गते । तत्कालीन एमालेका महासचिव रहेका मदनकुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितको ०५० साल जेठ ३ गते आजकै दिन चितवनको दासढुंगामा रहस्यमय जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो ।
छप्की जाल लिएर माछा मार्न हिँडेका ४ युवाहरु मध्येका हेमबहादुरले नदीको एक भंगालोमा दुई चट्टानको बीचमा एउटा मुढाजस्तो देखिने वस्तु तैरिरहेको देखे । उनले साथीहरुलाई लास देखेको खबर गरे । हेमबहादुरले आफ्ना साथीहरुलाई देखाउँदै भने, ‘केटाहरु उ त्यो लास हो कि मुढा हो ?’ त्यसपछि सबै जना त्यतै लागे ।
आँखाको नानीको माथिल्लो भागमा हल्का चोट लागेको थियो । अन्य ठाउँमा चोट थिएन । ‘लास हेर्दा लाग्थ्यो, भरखरै उठेर बोल्छ जस्तो’ अनलाइनखबरसँग विगत २६ बर्ष पुरानो स्मृतिलाई ताजा गराउँदै हेमबहादुरले भने, ‘शरीरमा खैरो रङको लामो बाउले सर्ट थियो, सर्टका टाँक पनि सग्लै थिए, पेन्टी मात्रै थियो, पाइण्ट भने थिएन । दुवै खुट्टामा मोजा थिए । घुँडामा हल्का काटेको रगत बग्ला जस्तो ! कालोकालो अनुहार । रगत बग्ला जस्तो । आँखाको माथिल्लो भाग परेला नजिक रातो थियो । ’
आफूले देशमा जागिर माग्दा नपाएको र उमेरसमेत ढल्किन थालेको बताउँदै हेमबहादुरले भने ‘मैले अब के नै मागौं र ? मेरा छोराछोरीलाई अवसर दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।’
‘अहिले नेकपाकै सरकार छ, राष्ट्रपति स्वयं मदन भण्डारीकै श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ’ हेमबहादुरले भने, ‘अब यतिबेला उहाँहरुलाई यो क्षेत्रको विकास गर्न कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन, न त अरुलाई दोष लगाउने ठाँउ नै छ ।’